War ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo Al-Shabaab -
War ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo Al-Shabaab
Warar Aan ka helnay Saraakiisha Mukhtaar Roobow ku Dhow Dhow ayaa sheegaya in Mukhaar Roobow uu bilaabay Kala Fur Furda Maleeshiyada Al shabaab.
Qaar ka mid ah Saraakiisha Al-shabaab ee Markii Horaba Mukhtaar ay isku mabda ahaayeen ayaa waxaa la sheegayaa in intooda badanba ay ogolaadeen in ay ka soo goostaan Al-shabaab.
Waxaa ka loo intaas dheer qaar kale oo iyana go,aansaday in ay ka soo baxaan Shabaab ka dib Markii ay tashkiiliyeen Saraakiisha Mukhtaar ku hadafka ah ee Hadda Bilaabay in Qof qof si dhuumaalaysi ah ugu soo baxaan Al shabaab.
Tani ayaa waxay ka dhigan tahay Bur Burka soo wajahay Maleeshiyada Al shabaab ka dib markii Saragaalka layiraahdo Mukhtaar Roobow oo Beri ka mid ahaan jiray Al-shabaab Mas,uuliyiinta ugu sareeya uu bilaabay in uu soo dumo inta ugu muhiimsan Saraakiisha Al shabaab.
Xogtan ayaa waxay imaanaysaa ka dib Bishan dhamaatay ee December oo kaliya 8 Sargaal oo Shabaab ah iyo ciidankooda macal Gaadiidkooda ay isku dhiibeen Maamulka Koonfur Galbeed.
Related Items:Featured, War ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo Al-Shabaab
War saxaafadeed xasaasi ah oo laga soo saaray degmadda Afgooye